Ndị nnọchi anya NASA wepụtara nkọwapụta nke Ingenuity | Site na Linux
Ndị nnọchi anya NASA wepụtara nkọwapụta nke ịdị akọ
Febọchị ole na ole gara aga ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ mbara igwe NASA, N'ajụjụ ọnụ Spectrum IEEE, kpughere nkọwa banyere Ingenuity autonomous reconnaissance helikopta, nke gara nke ọma rutere na Mars dị ka akụkụ nke ọrụ Mars 2020.
Ihe pụrụ iche nke oru ngo bụ ojiji nke njikwa njikwa Qualcomm Snapdragon 801 SoC, nke eji arụ ọrụ nke ekwentị. Ikike ngwanrọ na-adabere na kernel Linux na ngwanrọ na-emeghe windo.
Ekwesiri ighota na nke a bu ihe mbu nke Linux na ugboelu bu ndi Martna. Ọzọkwa, iji sọftụwia mepere emepe na ihe akụrụngwa nwere ngwa ahịa na-enye ndị nwere mmasị ịnakọta onwe ha ụdị drones n'onwe ha.
Mkpebi a bụ n'ihi n'eziokwu na ịchịkwa ụgbọ mmiri na-efe efe chọrọ ike dị ukwuu karịa ijikwa rover, nke a kwadebere n'ụzọ pụrụ iche na-arụ ọrụ yana nchebe radiation ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ijigide ụgbọ elu chọrọ ọrụ nke njikwa njikwa na ọnụego nke 500 cycles kwa nkeji, yana nyocha onyonyo na ọnụego 30 na nkeji nke abụọ.
The Snapdragon 801 SoC (Quad isi 2,26GHz, 2GB Ram, 32GB Flash) eji ya iji nye usoro ihe eji eme Linux, nke bu maka oru nke dị elu dị ka igodo anya na-adabere na nyocha nke ihe oyiyi igwefoto, njikwa data, nhazi iwu, ọgbọ telemetry na mmezi nke ọwa nkwukọrịta ikuku.
Ihe Nhazi na-ejikọ site na UART interface na microcontrollers abụọ (MCU Texas Instruments TMS570LC43x, ARM Cortex-R5F, 300 MHz, 512 KB RAM, 4 MB Flash, UART, SPI, GPIO) na-arụ ọrụ njikwa ụgbọ elu.
A na-eji microcontrollers abụọ ahụ eme ihe maka mgbapụta ọ bụrụ na ọ dara ha na-enwetakwa ihe ọmụma yiri ha site na ihe mmetụta. Naanị otu microcontroller nọ n'ọrụ, a na-eji nke abụọ eme ihe ma ọ bụrụ na ọ daa ma ọ nwere ike ijikwa ya. FPGA MicroSemi ProASIC3L bụ ọrụ maka ịnyefe data sitere na sensọ na microcontrollers ma soro ndị na-eme ihe na-achịkwa eriri ahụ, na-atụgharịkwa na microcontroller na-anọchi anya ma ọ bụrụ na ọdịda.
Nke otu, drone na-eji SparkFun Electronics laser altimeter, ụlọ ọrụ ngwaike emeghe na otu n’ime ndị okike nke nkọwapụta ngwaike ihe eji emeghe (OSHW). N'ime ihe ndị ọzọ a na-ahụkarị, gyrostabilizer (IMU) na kamera vidio eji na smartphones apụta.
A na-eji igwefoto VGA soro ọnọdụ, ntuziaka na ọsọ site na ntunye-site-etiti. A na-eji igwefoto agba nke 13 megapixel nke abụọ kee ihe onyonyo nke mpaghara ahụ.
Weta Inwe Ezi uche na Mars n'otu akụkụ ma bulie ya ma daa ọbụna otu ugboro bụ mmeri doro anya maka NASA, JPL's Tim Canham na-agwa anyị.
Canham nyeere aka ịmepụta ụlọ ọrụ ngwanrọ nke na-agba ume. Dị ka onye isi njikwa arụmọrụ, ọ na-elekwasị anya ugbu a na nhazi ụgbọ elu na ịhazi otu ndị otu egwuregwu Perseverance. Anyị gwara Canham okwu ka anyị ghọta nke ọma otu ọgụgụ isi ga-esi dabere na nnwere onwe maka ụgbọ elu ya ọzọ na Mars.
E mepụtara ihe ngwanrọ njikwa ụgbọ elu na NASA's JPL (Jet Propulsion Laboratory) maka obere Satellites nke obere na obere obere (cubsats) ma mepụtara ya ọtụtụ afọ dịka akụkụ nke oghere oghere F Prime (F´), kesara n'okpuru Akwụkwọ ikike Apache 2.0.
F Prime na-enye akụrụngwa maka mmepe ngwa ngwa nke usoro njikwa ụgbọ elu na metụtara agbakwunyere ngwa. Ekewara sọftụwia Flight n’otu n’otu n’otu yana ihe eji eme mmemme nke ọma.
Na mgbakwunye na akụkụ ndị pụrụ iche, a na-enye usoro C ++ na mmejuputa atụmatụ dịka ịnata ozi na multithreading, yana ngwaọrụ ihe atụ nke na-enye gị ohere ijikọ ihe dị iche iche wee mepụta koodu na-akpaghị aka.
Finalmente ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịkpọ njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ndị nnọchi anya NASA wepụtara nkọwapụta nke ịdị akọ
WhatsApp kọwara ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ha anabataghị usoro ọrụ ọhụụ ọhụrụ
Asụsụ mmemme Pascal na-eme afọ iri ise